[67% OFF] Iikhuphoni zeLenskart.us kunye neeKhowudi zesaphulelo
Lenskart.us Iikhowudi zekhuphoni
Iipesenti ezili-20 zingaphandle kweSitewide + zokuHambisa simahla Lenskart.us Iikhuphoni zangoku. Eli phepha linoluhlu lwazo zonke iikhowudi zekhuphoni zeLenskart.us ezisandula ukungeniswa, zithunyelwa nge-tweet, okanye zavotelwa zisebenza luluntu. Indawo eqinisekisiweyo. Ukulinganisa iLenskart.us. Nxibelelana neLenskart.us. Ujonge okwangoku lenskart.us amatikiti kunye nokwenyusa isaphulelo ngo-Agasti 2021. Ngakumbi malunga nale webhusayithi ...
Iipesenti ezintlanu zeOrder yee-Ord $ 30 + Sitewide I-LensKart ineyona ingqokelela inkulu yeelensi zonxibelelwano ezinesaphulelo kwiimpawu eziphezulu kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho kuJohnson & Johnson, Bausch & Lomb, Cooper Vision kunye neCiba Vision. IiLenskart zanamhlanje i-USA IziPhumo eziPhezulu: Thenga i-1, Fumana i-1 Simahla kuzo zonke iiglasi zamehlo nge-10% kwiOda yakho
Gcina Imali NgeKhowudi Ivawutsha inceda abathengi abanjengawe ukugcina kwizinto ozithengayo kwiiwebhusayithi zeLenskart okanye kwi-app yeselfowuni. Okwangoku sineziponi ezingama-28 zeLenskart ezisebenzayo kwiphepha lethu. Cofa kuyo nayiphi na kuzo ukuze iphinde ithunyelwe kwiphepha lokunikezela kwaye ugcine ukuya kuthi ga kwi-70% + 50% yokubuyisa imali!
Amanqaku ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-20 ngeKhowudi yokuNgqinisisa Eyona ndlela yokunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi beLensKart India ngeWhatsApp US apha (1) -201-630-6792 nange-imeyile ku-customer@lenskart.us okanye kwifom yoqhakamshelwano. Malunga neLensKart India. Eyasungulwa ngonyaka ka-2010 ngumsebenzi wangaphambili weMicrosoft, iLensKart India yenye yezona zinto zikhula ngokukhawuleza kwihlabathi.
Fumana ukuya kuma-10% ngeKhowudi yeSaphulelo Fumana iikhowudi zokunyusa zakutshanje zeLenskart, amatikiti kunye nezivumelwano zikaJulayi 2021. Gcina ngoku kwintengiso yakho elandelayo kwi-Intanethi.
Thenga i-1, Fumana i-1 yasimahla + engaphezulu nge-20% ukhuphe zonke ii-Eyewear Phonononga iilenkart.com zamakhuphoni amva nje, iikhowudi zokunyusa kunye nezivumelwano ngo-Agasti 2021. Fumana izibonelelo zokuhambisa simahla kunye ne-30% yezahlulo ezisuka eLenskart kuphela kwi couponannie.com. Ezizimeleyo kunye neeNew Offers ezongeziweyo mihla le. Ungaze uhlawule ixabiso elipheleleyo!
Thatha i-10% yeSaphulelo kunye neKhowudi yokuThengisa Abantu bebesithembile iminyaka ngokubanceda ukuba bafumane iikhowudi zekhuphoni kwiindawo zabo abazithandayo ze-ecommerce, kubandakanya iLenskart. Ukuba ujonge ukugcina imali, i-100% yeekhowudi zesaphulelo eziyinyani aziyi kukuvumela. Ukuba ufuna izakhelo ezitsha, yiya eLenskart ngezinye zezona zintengiso zintle ezikhoyo.
Thenga i-1 Fumana i-1 yasimahla + eyongezelelweyo engama-27% kwiiglasi zamehlo Imicimbi yeglasi kunye namakhuphoni kuba ngamanye amaxesha ukuthenga kuhlahlo-lwabiwo mali kumnandi kakhulu! I-TG fumana ezona zibonelelo zibalaseleyo kwiiglasi zamehlo kunye neetoni zethu zamva nje kunye neekhowudi zokukhuthaza. Nokuba kuphefumlelwe ukuvuna okanye isitayile sangoku, iLenskart.com igcina iifreyimu ezifanelekileyo ozifunayo.
I-10% ishiye iodolo yakho Umdlali ophambili we-omnichannel wamazwe aphesheya, iLenskart ibonelela ngoyilo lwe-Italian olugqwesileyo oluxhaswe bubuchwephesha baseJamani. Ukubamba ifashoni phambili, iindlela zehlabathi zokwazisa uyilo olutsha rhoqo ngenyanga, iLenskart iyiguqule indlela abantu abathenga ngayo iimpahla zamehlo.